Itanki yentlanzi okanye i-aquarium yeyiphi engcono? | Ngeentlanzi
Ngokuqinisekileyo abaninzi bethu bacinga okanye banayo umfanekiso wentlanzi etankini yentlanzi engqukuva, kwaye zange saze siqwalasele ukuba yeyona ndawo yokuhlala yokwenyani okanye bonwabile ukujikeleza kwisangqa esincinci. Sinenkolelo yokuba intlanzi iyonwabile ngokuyinika ukutya kwaye inamanzi ayo, kodwa oku akusoloko kunjalo.
Uninzi lweentlanzi zamanzi abandayo ezinje nge ikhaphethi yegolideAbo kuthi bacinga ukuba ngokuzifaka kwitanki leentlanzi sinalo lonke ukhathalelo olwenziweyo. Zihlala zibonisiwe zezipho okanye ezona zibalulekileyo ebantwaneni. Kodwa yinkolelo engeyiyo kuba ngelishwa zimbalwa iikopi ezithi usinde kwezi meko kwixesha elide
Kuya kufuneka sikhumbule ukuba kwakamsinya nje sakuba sifumene, kule meko, intlanzi ezandleni zethu, sizibophelele kuyo ikunike ubomi obunesidima ngononophelo kunye nokuqwalaselwa okufunekayo nokuba yintlanzi. Ukuyigcina kwitanki encinci yentlanzi ayibobomi obunesidima, eyona nto icebisayo ihlala ikwi i-aquarium okanye ichibi.
Kwiitanki zentlanzi indawo incinci kangangokuba iintlanzi azizokwazi ukudada ke ngoko siya kumguqula abe yintlanzi engonwabanga. Kananjalo ayizukukhula kumanqanaba aqikelelweyo kuba sikhuthaza 'ubufutshane', kuba asinandawo yaneleyo, amalungu angaphakathi awakhuli kwaye ayibangele iingxaki zempilo. Kwaye ngokucacileyo amanzi ngaphandle kwesihluzo awakwazi ukucoceka ngokupheleleyo kuba kuya kuhlala kukho ukutya kunye nelindle labo.
Kwi-aquarium, inokuba yenye ye Ubungakanani obubonisiweyo beentlanzi esizazisa ngazo, iza ixhotyiswe ngokupheleleyo okanye ubuncinci ilungiselelwe ukufudumeza kunye nenkqubo yokucoca ukukhanya. Kwi-aquarium, okufunwayo kukwenza ifayile ye Indalo yendalo, izityalo, igrabile, amatye ... ngendlela yokuba iintlanzi zihlala kwiimeko ezifanayo nezo bezinokuba kwindawo yazo yemvelaphi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Itanki yentlanzi okanye i-aquarium yeyiphi engcono?